FBI-da oo shaacisay inaysan jirin wax dacwad ah oo lagu soo oogayo Mrs Hillary Clinton (CADDEYN) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
FBI-da oo shaacisay inaysan jirin wax dacwad ah oo lagu soo oogayo Mrs Hillary Clinton (CADDEYN)
Hay’adda dambi baarista ee FBI-da ayaa soo gaba-gabeeysay baaritaanadii ay ku haysay E-mailada ay isticmaali jirtay musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga Mrs Hillary Clinton, waxayna FBI-da sheegtay in wax dambi ah lagu waayay Mrs. Clinton.
Madaxa hay’adda FBI-da James Comey oo 28-kii bishii Oktoober waraaq u diray Kongress-ka Mareykanka ayaa sheegay inay dib u bilaabayaan baaritaankii ay ku wadeen E-mailadii ay sida khaldan u isticmaashay Mrs. Hillary Clinton xilligii ay ahayd xoghayaha arrimaha dibada ee dalka Mareykanka.
Mr. Comey ayaa xilligaasi sheegay inay heleen E-mailo hor-leh ayna dib u eegayaan, waxaana si weyn eedeymahaasi u cambaareeyay xisbiga Dimuquraadiga oo ku tilmaamay fal lagu khal khal gelinayo ololaha doorashada ee Mrs. Hillary Clinton.
Madaxa FBI-da James Comey oo warqad kale uu xalay u diray Kongresska Mareykanka iyo hay’adaha kale ee dalkaasi, ku sheegay in maalmihii lasoo dhaafay baaritaano waqti kooban qaatay ay ku sameeyeen emailada cusub oo ay heleen, iyadoona ugu dambeyn ay caadatay inaan wax danbi ah lagu helin Mrs. Hillary Clinton.
Waxa uu Mr Comey tilmaamay inay dib u eegeen dhamaan emailada isgaarsiinta aheyd oo ay Mrs. Hillary Clinton adeegsatay markii ay ahayd xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka.
“Ma jiro wax iska bedelay natiijadda baaritaankeena, waxaana ku muujinay bishii July xushmadeynta xoghaye Hillary Clinton” Sidaas waxaa yiri madaxa hay’adda dambi baarista ee FBI-da James Comey.
Aqriso warqada uu James Comey u diray Kongresska iyo hay’adaha kale ee Mareykanka